နှစ်ချက် Swing - တရုတ် Renshi တံခါးပေါက် & Windows ကို
Window ကိုစောင်း & Turn
လက်ကိုင်နှင့်အတူ Window နေကာ
Chain Winder နှင့်အတူသြစတြေးလျစတိုင်နေကာ Window
လူပျို Swing တံခါး
Grid နှင့်အတူ hinge တံခါး
FOB စျေး: အမေရိကန် $ 50 - တစ်စတုရန်းမီတာလျှင် 150
Min.Order အရေအတွက်:5စတုရန်းမီတာ
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: တစ်လလျှင် 5000 စတုရန်းမီတာ
ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ: T / T, L ကို A / C, Western Union, D ကို / A, D ကို / P ကို
frame က Profiles
1. 6063-T5 အပူချိုးလူမီနီယံ extrusion, ပြတင်းပေါက်များအတွက်တံခါးနှင့် 1.4mm အဘို့အထူ 2.0mm 2. 6063-T5 Non-အပူချိုးလူမီနီယံ extrusion, ပြတင်းပေါက်များအတွက်တံခါးနှင့် 1.4mm အဘို့အထူ 2.0mm 3.Aluminum ဝတ်သစ်သား
1. ကိုနှစ်ချက်ဖန်: + 12A5+ 5;5+ 12A + 5;6+ 12A + 6;5+ 19A +5။ တင့်, အာဂွန်ဓာတ်ငွေ့, E-အနိမျ့နှင့် built-in လိုက်ကာရရှိနိုင်ပါသည် 2. လူပျိုဖန်: 4; 5; 6; 8; 12 3. လမိုင်းဖန်:3+ 0.38pvb + 3;5+ 0.76pvb + 5
1.German အမှတ်တံဆိပ်: SIEGENIA, Gu, ROTO 2.Australian အမှတ်တံဆိပ်: DORIC 3.Chinese အမှတ်တံဆိပ်: KINLONG, HOPO
1.Stainless သံမဏိလုံခြုံရေးမျက်နှာပြင် 2.Retractable pleated မျက်နှာပြင် 3.Normal ဖိုက်ဘာမှန်မျက်နှာပြင်
မျက်နှာပြင် finish ကို
1.Powder အပေါ်ယံပိုင်း 2.Anodized 3.Electrophoresis 4.Wood ဘောဇဉ်5.Fluorine ကာဗွန်အပေါ်ယံပိုင်း
အလူမီနီထောင့်, သစ်ထုတ်ဖော်ပြသ, ခွဲထားလိုက်တော့ & ခွဲအကြီးအကဲများရရှိနိုင်ပါသည်
လက်မှတ် AS2047, AS / NZS2208, AS1288, ISO9001, TUV, SGS
အနုပညာ & humanized ဒီဇိုင်း
2) ပွတ်တိုက် Stay
3) နှစ်ချက် Glass ကို
AS / NZS 2208 စံနှစ်ဆ toughened ဖန်, စွမ်းအင်ထိရောက်နှင့်မြင့်မားသောထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်း
4) ကို C orner J ကို oint
ယူအက်စ်အေအမှတ်တံဆိပ်ဖန် sealant နှင့်ဂျာမန်အမှတ်တံဆိပ်စည်းဝေးပွဲကိုကော်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပေါင်းစည်းမှု, ကြာရှည်ခံမှု, အပူ & အအေးခုခံအပေါ်စွမ်းဆောင်မှုနှင့်ရာသီဥတု-အထောက်အထားအောင်မြင်ရန်
ယခင်: လက်ကိုင်နှင့်အတူ Window နေကာ
နောက်တစ်ခု: လူပျို Swing
လူမီနီယမ် Casement Window ကိုအသေးစိတ်
လူမီနီယမ်တံခါးပေါက်ပြီးတော့ Windows ကို Designs
Windows အတွက် Fixed လူမီနီယမ်
လူမီနီယမ်အစားထိုး Windows ကို
လူမီနီယမ် Window ကိုပေးသွင်း
အလူမီနီရှ် Windows ကို
လူမီနီယမ်မုန်တိုင်း Windows ကို
Casement လူမီနီယမ်ကို Windows
Casement Window ကိုနှစ်ချက် Casement Window လူမီနီယမ်ကိုနှစ်ချက် glaze Window Inswing
* CAPTCHA: အဆိုပါ select လုပ်ပါ ကျေးဇူးပြု. ဖလား